Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0113 zom
Alakamisy 04 Apr
“Tsapan’i Hôseà, rehefa nandeha teny ny fotoana, fa ny fiainany dia fanehoana ny ratram-pon’ Andriamanitra, ny alahelony dia taratry ny alahelon’Andriamanitra. Tao anatin’ny fahoriana niainany amin’ny maha-fihetsika fiombonana alahelo amin’Andriamanitra izany, dia azo antoka fa takatr’ity mpaminany ity ny hevitry ny fanambadiana izay notanterahiny araka ny baikon’ Andriamanitra...
“Tamin’ny niainany teo amin’ny fiainany ny fanandraman’Ilay Sakaizan’ny Isiraely irery ihany no nahatsapan’ity mpaminany ity ny firaisam-po tamin’ Andriamanitra teo amin’ny toe-javatra nolalovany. Ny fanambadiany dia lesona, sary fanazavana, fa tsy sary an’ohatra na sakramenta tsy akory.” — The Prophets, Abraham J. Heschel, (Mass.: Prince Press, 2001), t. 56.
“Tamin’ny fitenenana an’ohatra no namelabelaran’i Hôseà tamin’ireo firenena folo ny fikasan’Andriamanitra hanome indray ho an’ny fanahy rehetra mibebaka ka te hikambana amin’ny Fiangonany eto an-tany, ireo fitahiana nomeny ny Isiraely tao amin’ny tany nampanantenaina tamin’ny andro nanehoan’izy ireo ny fahatokiany tamin’ny Andriamaniny. Toy izao no tenin’ny Tompo raha nilaza ny amin’ny Isiraely ho firenena izay niriny fatratra tokoa hanehoany ny famindrampony: ‘Koa, indro, Izaho dia hitaona azy ka hitondra azy ho any an-efitra ary hanao teny malefaka hahafinaritra azy. Ary hatrany dia homeko azy ny tanim-boalobony sy ny lohasaha Akora ho varavaram-panantenana; Ary any no hamaliany toy ny tamin'ny andro fahatanorany, dia toy ny tamin'ny andro niakarany avy tany amin'ny tany Egypta. ’” — MM, t. 249.
Mazàna isika no mihevitra fa ny fiankohofana eo anoloana sarivongana no atao hoe fanompoan-tsampy. Mety ho zavatra tsy hita mivantana nefa mamitaka mihoatra noho izany ny fanompoan-tsampy. Amin’ny fomba ahoana?
Hadihadio misimisy kokoa eo amin’ny kilasy ny tena dikan’ny hoe mahafantatra an’Andriamanitra. Raha miteny ianao fa “mahafantatra an’Andriamanitra,” inona no tianao hambara amin’izany? Fomba ahoana no ahazoana izany fahalalana an’Andriamanitra izany?
Nisy teôlôjianina tany aloha tany nilaza fa tsy manana fihetseham-po Andriamanitra, izany hoe, tsy mba fanandramana iainany izany hoe alahelo na fifaliana, vokatry ny ataon’ny zava-manana aina hafa, tahaka ny olombelona, ohatra. Inoa no mety mahatonga ny olona hihevitra tahaka izany? Mandà izany foto-kevitra izany, fa nahoana?
Diniho lalindalina kokoa ny filazana fa tena lafo tokoa ny fanavotana antsika. Inona no ambaran’izany amintsika momba ny tombam-bidintsika eo anatrehan’Andriamanitra?